သတင်း – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
Posted on February 15, 2019 by moezaw
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ဦးကိုနီကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခက်လုပ်ကြံခဲ့သည့် သေနတ်သမားကြည်လင်းနှင့်​ အောင်ဝင်းဇော်တို့ကို မသေမချင်ကြိုးကွင်းစွတ်သတ်ရန်နှင့်ဇေယျာဖြိုးကို ထောင်ဒဏ် ၅နှစ်၊အောင်ဝင်းထွန်းကို ထောင်၃နှစ် Continue reading “ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု ကြည်လင်းနဲ့ အပေါင်းပါ ၃ ဦး ကို အမိန့်ချလိုက်ပြီ”
Posted in မှုခင်းသတင်း, သတင်းLeaveaComment on ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု ကြည်လင်းနဲ့ အပေါင်းပါ ၃ ဦး ကို အမိန့်ချလိုက်ပြီ
ပုံမှန်ခွဲစိတ်မှုဆိုရင် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် အချိန်ကြာမြင့်ပြီး ယခုခွဲစိတ်မှုက ရင်ချင်းဆက်အမွှာဖြစ်နေတာကြောင့် တစ်နာရီကျော်ကြာခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး အမှားအယွင်းမဖြစ်ရအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ Continue reading “ကလေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ရင်ချင်းဆက်အမြွှာပူး အောင်မြင်စွာ မွေးဖွား”
Posted in ကျန်းမာရေး, သတင်းLeaveaComment on ကလေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ရင်ချင်းဆက်အမြွှာပူး အောင်မြင်စွာ မွေးဖွား
ကားပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံအိတ်(ငွေကျပ် ၂၂၅၀၀၀ နှင့် မှတ်ပုံတင် ၊ အရေးကြီး ဘဏ်ကဒ်များ)ဘာတစ်ခုမှမယိုယွင်းပဲ အကုန်ပြန်ပေးတဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ဦးလေး ဦးမျိုးအောင်နဲ့GNB (Good Nature Brothers) Taxi မှ အကိုများဦးလေးများ Continue reading “ကားပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ငွေကျပ် ၂ သိန်းကျော်နှင့် အရေးကြီးဘဏ်ကဒ်များ အကုန်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးမျိုးအောင်”
Posted in သတင်းLeaveaComment on ကားပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ငွေကျပ် ၂ သိန်းကျော်နှင့် အရေးကြီးဘဏ်ကဒ်များ အကုန်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးမျိုးအောင်
တည်းခိုခန်းမှာ ကာမအကြိမ်ကြိမ်ရယူပြီး သမီးကလေးမွေးတော့မှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်
Posted on January 22, 2019 by moezaw
အကူအညီမဲ့နေသူ မိန်းခလေးကို ရွှေပြည်သာ MCRA-SHအဖွဲ့က အစမှအဆုံးတိုင် လိုက်လံကူညီပေးတော့ကာမလိမ်လည်မှုနဲ့ တရားရုံးက အမှုလက်ခံလိုက်ပြီ Continue reading “တည်းခိုခန်းမှာ ကာမအကြိမ်ကြိမ်ရယူပြီး သမီးကလေးမွေးတော့မှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်”
Posted in မှုခင်းသတင်း, သတင်းLeaveaComment on တည်းခိုခန်းမှာ ကာမအကြိမ်ကြိမ်ရယူပြီး သမီးကလေးမွေးတော့မှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်
ဟာသသရုပ်ဆောင်ကြီး ကင်းကောင် ပုပ္ပါးမှာ ကွယ်လွန်
ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ကင်းကောင်ဟာ သူ့ရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းကို ခံရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကင်းကောင်က သူကျရာဇာတ်ရုပ်အတိုင်း အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်အတွက် အနုပညာအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ နံနက်မှာတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော်ဦးကင်းကောင်ဟာ ဒါရိုက်တာ ကျော်ဇောလင်းရိုက်ကူးမည့် ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပုပ္ပါးမှာရိုက်ကူးရင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၂ရက် မနက်၇နာရီခန့်မှာ ကွယ်လွန်သွားပပြီ။ ကင်းကောင်ရဲ့ အလောင်းကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုကရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေကြပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကြီး လွင်မိုးရဲ့ အတည်ပြုစကား
ပရိသတ်တွေကို အမြဲ ရယ်မောပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ ဦးကင်းကောင်တစ်ယောက် အခုလို ရုတ်တရတ်ဆုံးပါးသွားတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဦးကင်းကောင်တစ်ယောက် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ မိုမိုလေးမှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
Posted in သတင်း, အနုပညာရပ်ဝန်းLeaveaComment on ဟာသသရုပ်ဆောင်ကြီး ကင်းကောင် ပုပ္ပါးမှာ ကွယ်လွန်
Posted on January 20, 2019 by moezaw
မန္တလေးမြို့  မဟာအောင်မြေမြို့ နယ်ရှိ အလယ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်မလွတ်ကင်းသေးသည့် (၁၅)နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူသုံးဦးကို ခိုးယူခေါ်ဆောင်သွားပြီး ၎င်းတို့အနက် တစ်ဦးအဓမ္မပြုကျင့်ခံရသဖြင့် ကျူးလွန်သူနှင့် အားပေးကူညီသူ နှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း Continue reading “(၁၅)နှစ်ကျောင်းသူသုံးဦးကို ခိုးယူခေါ်ဆောင် အဓမ္မပြုကျင့်သူတွေကို ဖမ်းလိုက်ပြီ”
Posted in မှုခင်းသတင်း, သတင်းLeaveaComment on (၁၅)နှစ်ကျောင်းသူသုံးဦးကို ခိုးယူခေါ်ဆောင် အဓမ္မပြုကျင့်သူတွေကို ဖမ်းလိုက်ပြီ
သမီးအရင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုကျင့် 😢
သမီးအရင်းကို 11နှစ်​အရွယ်​ကတည်းကအကြိမ်​ကြိမ်​ပြုကျင့်​လာတာအခု သမီးဖြစ်​သူ21ပြည့်​တဲ့အထိ ။
ရေးမြို့နယ် ကျောက်မိချောင်းကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်မိချောင်း(မြောက်)ရွာ နှစ်တန်ကူးခြံစု ကွမ်းသီးခြံတွင်းနေ. မ……(21)….နှစ်(ဘ)ဦးဝင်းသန်းထွန်း(ခ)သားကြီး စက်ချူပ်လုပ်ကိုင်သူ နေအိမ်တွင်နေထိုင်ပြီး 1.1.2019. 10:00 နာရီ အချိန် နေအိမ်တွင်တဦးတည်းရှိနေစဉ် Continue reading “သမီးအရင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုကျင့် 😢”
Posted in မှုခင်းသတင်း, သတင်းLeaveaComment on သမီးအရင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုကျင့် 😢
ရွှေသားစစ်စစ် ၁ပိဿာ၂၀သားရှိတဲ့ ရွှေအင်္ကျီဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ မုံရွာကအလှူဒါယကာမ
မုံရွာအလှူပွဲ ကြီိးအတွက်ဝတ်ဆင်ဖို့ တထည်လုံး ကို ရွှေသားစစ်စစ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ရွှေအင်္ကျီ(၁၅ပဲရည်) ၁ပိဿ၂၀သား နဲ့ ရွှေလက်ကိုင်အိတ် ရွှေတဆင်စာ ရွှေပုဝါ တွေ အားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မုံရွာ က အကိုနဲ့အမရေ Continue reading “ရွှေသားစစ်စစ် ၁ပိဿာ၂၀သားရှိတဲ့ ရွှေအင်္ကျီဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ မုံရွာကအလှူဒါယကာမ”
Posted in သတင်းLeaveaComment on ရွှေသားစစ်စစ် ၁ပိဿာ၂၀သားရှိတဲ့ ရွှေအင်္ကျီဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ မုံရွာကအလှူဒါယကာမ
အတန်းပိုင်ဆရာက ၈ တန်း ကျောင်းသူအား ဖုန်းမက်ဆေ့ဖြင့် မဖွယ်မရာစာများပို့
အတန်းပိုင်ဆရာက ၄င်း၏ကျောင်းသူအား “နမ်းရှိုက်ချင်တယ်၊ နမ်းရှိုက်ခွင့်မရရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာ သိလား” ဟုဆိုကာ ဖုန်းမှစာပို့မှုဖြစ်ပွား ။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်ရှိကျောင်း၌ပညာသင်ကြားနေသော ၈ တန်းကျောင်းသူအား ဖုန်းမက်ဆေ့ဖြင့် မဖွယ်မရာစာများပေးပို့သူ အတန်းပိုင်ဆရာကို ၆၆(ဃ) ဖြင့်အမှုဖွင့် Continue reading “အတန်းပိုင်ဆရာက ၈ တန်း ကျောင်းသူအား ဖုန်းမက်ဆေ့ဖြင့် မဖွယ်မရာစာများပို့”
Posted in မှုခင်းသတင်း, သတင်းLeaveaComment on အတန်းပိုင်ဆရာက ၈ တန်း ကျောင်းသူအား ဖုန်းမက်ဆေ့ဖြင့် မဖွယ်မရာစာများပို့
Posted on January 10, 2019 by moezaw
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၆ဝ ကျော်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကို ၂၅ တွဲနဲ့ ပြန်လည်တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေဖို့ ပြင်နေပြီး ပထမဆုံးအတွဲကို ၂ဝ၁၉ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ထုတ်ဝေဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ မြန်မာအစိုးရ သတင်းစာတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
နဂိုမူလ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွေကို ၁၅ တွဲနဲ့ ၁၉၅၄ ကနေ ၁၉၇၆ အတွင်း စာပေဗိမာန်ကနေ ထုတ်ခဲ့တာပါ။
ဦးနု ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်ချိန်မှာ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီကျမ်းတွေကို ဂျပန်ခေတ်ကတည်းက ထုတ်ဖို့ Continue reading “လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၆ဝ ကျော်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကို ပြန်လည်တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေမည်”
Posted in ဗဟုသုတ, သတင်းLeaveaComment on လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၆ဝ ကျော်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကို ပြန်လည်တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေမည်
“ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း”4views